Ukubolekisa format izikrini LED ayingxenye ebalulekile ye-Digital Out of Home landscape
Anikeza a nezimo, yesikhulumi wedijithali ukuletha brand ekuphileni bese uxhuma abakhangisi nge abathengi e sengcondvo enhle ukuthenga.
Kunezindlela eziningana ongakhetha ivulekele zemicimbi abafisa ukufaka isikrini LED futhi abaningi amaklayenti ADI sika oyikhethile imodeli kobunikazi esibukweni.
Isikrini ubunikazi ihlinzeka icala esicindezelayo sokuba ngenzuzo ehlala isikhathi eside ngokwezimali futhi ubeka zemicimbi okudayisa kanye zabanikazi esimweni eqinile commercial lapho izivumelwano abezindaba kanye nokukhangisa izimali bakhathazeka. Nakuba sesikrini hardware izindleko zibalulekile, zezinzuzo ezitholwa amaklayenti lapho ucacise futhi uthenge siqu abezindaba LED zabo kukhona ububanzi-efinyelela. Abaningi baye recouped izindleko zabo esikhathini esiyizinyanga 12-18.
Ukungeza ukusakaza kwezezimali i extra
Ukuthengisa isikhala ukukhangisa ku Isikhungo sokuthenga LED Screen yakho kungaba ukusakaza kwezezimali okukhulu. Izikrini LED banekhono ukubonisa izikhangiso eziningi okukuvumela ukuthengisa isabelo ngokwengxenye futhi namanje kubuyise kwedivayisi kwamanethiwekhi imikhankaso yakho siqu. Elikhulu Ifomethi Isici Screens eziyinxanxathela izindawo okusezingeni eliphezulu traffic futhi ukudweba eziningi amehlo lokhu kusho zamanani aphambili isikhala ukukhangisa.
Ukuthola abaqashi ngaphezulu
Uma abaqashi bakho abanamandla Ukhetha phakathi amaningi eziyinxanxathela a Ifomethi Esibanzi LED Screen e isikhungo sakho engenza umehluko. Kumi esiqongweni sezindawo isithombe siveza, ikhono kwemakethe esitolo yakho maphakathi itholakala zinikeza ngethuba elihle. Ukungeza isabelo khulula esifushane ngokubonisa ingaphinda isetshenziswe ukuze uthole abaqashi ezingaba phezu umugqa